Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Abụọ 20:1-37
Mba ndị bi ndị Juda nso bịara ịlụso ha agha (1-4)
Jehoshafat rịọrọ Chineke ka o nyere ya aka (5-13)
Jehova zara ekpere ya (14-19)
Chineke rụrụ ọrụ ebube zọpụta ndị Juda (20-30)
Mgbe Eze Jehoshafat nwụrụ (31-37)
20 Ka oge na-aga, ndị Moab,+ ndị Amọn,+ na ụfọdụ ndị Amọnim* bịara ịlụso Jehoshafat agha. 2 Ndị mmadụ gara gwa Jehoshafat, sị: “Ìgwè ndị agha si n’Ịdọm+ ná mpaghara oké osimiri* na-abịa ịlụso gị agha. Ha nọ na Hazazọn-tema, ya bụ, En-gedi.”+ 3 Mgbe Jehoshafat nụrụ ihe a, ụjọ bịara ya, ya ekpebie ịchọ Jehova ka o duzie ya.+ Ọ gwaziri ndị Juda niile ka ha buwe ọnụ. 4 Ndị Juda gbakọkwara ka ha jụọ Jehova ase.+ Ha si n’obodo niile dị na Juda bịa ka ha jụọ Jehova ase. 5 Jehoshafat wee bilie n’ebe ahụ ndị Juda na ndị bi na Jeruselem gbakọrọ n’ụlọ Jehova, nọrọkwa n’ihu ogige a rụrụ ọhụrụ, 6 sị: “Jehova bụ́ Chineke nna nna anyị hà, ọ́ bụghị gị bụ Chineke bi n’eluigwe?+ Ọ́ bụghị gị na-achị alaeze mba niile?+ Ọ bụ gị na-enye ike, na-emekwa ka a bụrụ onye ukwu. O nweghị onye ga-emegide gị, ya agaziere ya.+ 7 Chineke anyị, ọ́ bụghị gị chụpụrụ ndị bibu n’ala a n’ihi ndị gị Izrel, werezie ya nye ụmụ* Ebreham enyi gị, ka ọ bụrụ nke ha mgbe niile?+ 8 Ha bịara biri na ya, rụọkwara gị ụlọ nsọ ka a nọrọ na-eto aha gị.+ Ha sịrị, 9 ‘Ọ bụrụ na anyị nwee nsogbu, ma ọ̀ bụ nke mma agha kpatara, ma ọ̀ bụ nke ikpe a mara anyị kpatara, ma ọ̀ bụ nke ọrịa na-efe efe ma ọ̀ bụ ụnwụ kpatara, anyị eguzoro n’ihu ụlọ a nakwa n’ihu gị (n’ihi na ị họọrọ ụlọ a ka a nọrọ na ya na-eto aha gị)+ kpọkuo gị ka i nyere anyị aka ná nsogbu anyị, biko, nụrụ arịrịọ anyị, napụtakwa anyị.’+ 10 Ugbu a, legodị ihe ndị Amọn na-eme, ha na ndị Moab, na ndị si n’ala Sia bụ́ ugwu ugwu,+ ndị ị na-ekweghị ka ndị Izrel metụ aka mgbe ha si Ijipt na-apụta. Ha hapụrụ ha, ha ebibighịkwa ha.+ 11 Ma ugbu a, ha ji ihe ọjọọ akwụ anyị ụgwọ ihe ọma anyị meere ha. Ha na-abịa ịchụpụ anyị n’ala i nyere anyị.+ 12 Chineke anyị, ị́ gaghị ata ha ahụhụ?+ O nweghị ihe anyị ga-emeli ìgwè mmadụ a na-abịa ịlụso anyị agha. Anyị amaghị ihe anyị ga-eme eme.+ Ma, anyị na-atụ anya na ị ga-enyere anyị aka.”+ 13 Ka ọ na-ekwu ihe a, ndị Juda niile guzo n’ihu Jehova, ma ụmụ ha, ma ndị nwunye ha, ma ụmụntakịrị ha.* 14 Ka ha niile nọ ebe ahụ, mmụọ Jehova dakwasịrị Jahazayel nwa Zekaraya nwa Benaya nwa Jeayel nwa Matanaya onye Livaị nke si n’agbụrụ Esaf. 15 Jahazayel wee sị: “Ndị Juda niile na ndị bi na Jeruselem, nakwa Eze Jehoshafat, geenụ ntị. Nụrụnụ ihe Jehova gwara unu. Ọ sịrị: ‘Unu atụla egwu, unu atụkwala ụjọ n’ihi ìgwè mmadụ a. Agha a abụghị nke unu, kama ọ bụ nke Chineke.+ 16 Gakwurunụ ha echi. Ha ga-esi n’ụzọ e si abanye Ziz abịa. Unu ga-ahụ ha n’ebe dị nso n’ebe ndagwurugwu dị n’ihu ala ịkpa Jeruel jedebere. 17 Unu agaghị eso alụ agha a. Nọrọnụ ebe unu kwesịrị ịnọ. Guzoronụ otu ebe+ ka unu hụ otú Jehova ga-esi zọpụta unu.+ Ndị Juda na ndị bi na Jeruselem, unu atụla egwu, unu atụkwala ụjọ.+ Gakwurunụ ha echi. Jehova ga-anọnyekwara unu.’”+ 18 Ozugbo ahụ, Jehoshafat hulatara, kpọọ isiala. Ndị Juda niile na ndị niile bi na Jeruselem gbukwara ikpere n’ala n’ihu Jehova, kpọọrọ Jehova isiala.* 19 Ndị Livaị ndị si n’agbụrụ Kohat+ na ndị nke si n’agbụrụ Kora wee bilie jiri oké olu too Jehova bụ́ Chineke Izrel.+ 20 N’isi ụtụtụ echi ya, ndị Juda biliri gawa n’ala ịkpa Tekoa.+ Ka ha na-apụ, Jehoshafat biliri ọtọ, sị: “Ndị Juda na ndị bi na Jeruselem, geenụ m ntị. Tụkwasịnụ Jehova bụ́ Chineke unu obi, ka unu nwee ike ịkata obi.* Tụkwasịnụ ndị amụma ya obi,+ ka ihe wee gaziere unu.” 21 Jehoshafat na ndị ya gbakwara izu. Mgbe ha gbachara, ọ họpụtara ndị ga-abụku Jehova abụ.+ Ha ga-eyi uwe mara mma nke dị nsọ na-aga n’ihu ndị agha, na-eto Chineke, na-asị: “Keleenụ Jehova, n’ihi na ịhụnanya ya na-adịru mgbe ebighị ebi.”+ 22 Mgbe ndị Juda malitere ịṅụ ọṅụ, na-abụkwa abụ, Jehova mere ihe tụrụ ndị Amọn, ndị Moab, na ndị si n’ala Sia bụ́ ugwu ugwu n’anya, ha ahapụ ndị Juda ha bịara ịlụso agha, gburịtawa ibe ha.+ 23 Ndị Amọn na ndị Moab malitere igbu ndị si n’ala Sia bụ́ ugwu ugwu.+ Ha bibiri ha, laakwa ha n’iyi. Mgbe ha lachara ndị si Sia n’iyi, ha gburịtawara ibe ha.+ 24 Ma, mgbe ndị Juda ruru n’ụlọ nche dị n’ala ịkpa ahụ+ ma lee anya ebe ìgwè mmadụ ahụ nọ, ihe ha hụrụ bụ ozu tọgbọcha ebe ahụ niile,+ o nweghịkwa onye n’ime ha dị ndụ. 25 Jehoshafat na ndị agha ya gaziri ka ha kwakọrọ ngwongwo ha. Ha hụkwara na ha nwere ọtụtụ ngwongwo, ákwà, na arịa ndị bara ezigbo uru. Ha wee na-eyipụ ha ihe ndị ha yi, na-akwakọrọkwa ihe ha ruo mgbe ọ karịrị ihe ha ga-ebuli.+ Ha nọ na-akwakọrọ ngwongwo ndị ahụ ruo ụbọchị atọ, n’ihi na ha karịrị akarị. 26 N’ụbọchị nke anọ, ha gbakọrọ na Ndagwurugwu Beraka, n’ihi na ebe ahụ ka ha nọ too* Jehova. Ọ bụ ya mere ha ji akpọ ebe ahụ Ndagwurugwu Beraka*+ ruo taa. 27 Ndị Juda na ndị Jeruselem niile nakwa Jehoshafat onyeisi ha ṅụụrụ ọṅụ lọta Jeruselem. Ha nọ na-aṅụrị ọṅụ a n’ihi na Jehova mere ka ha merie ndị iro ha.+ 28 Ha nọ na-akpọ ụbọ akwara na une,+ na-afụkwa opi+ ka ha na-alọta Jeruselem. Ha gakwara n’ụlọ Jehova.+ 29 Mba dị iche iche malitere ịtụ Jehova Chineke ụjọ mgbe ha nụrụ na ọ lụsoro ndị iro Izrel agha.+ 30 N’ihi ya, e nweghị nsogbu ọ bụla n’ebe niile Jehoshafat na-achị. Chineke ya nọkwa na-eme ka ndị niile ọ na-achị zuru ike.+ 31 Jehoshafat nọkwa na-achị Juda. Ọ dị afọ iri atọ na ise mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ iri abụọ na ise na Jeruselem. Aha nne ya bụ Azuba, nwa Shilhaị.+ 32 Ọ nọkwa na-akpa àgwà ka Esa nna ya.+ Ọ hapụghị ịna-eme ka ya. O mekwara ihe ziri ezi n’anya Jehova.+ 33 Ma, e bibighị ebe ndị dị elu.+ Ndị mmadụ ekpebibeghịkwa ịchọ Chineke ndị nna nna ha.+ 34 Ma e dere akụkọ ndị ọzọ gbasara Jehoshafat, malite ná mbido ruo ná ngwụcha, n’akwụkwọ. Ọ bụ Jihu+ nwa Hanenaị+ dere ha n’akwụkwọ e dere gbasara ndị eze Izrel. 35 Mgbe e mechara, Jehoshafat eze Juda na Ehazaya eze Izrel, onye ajọ omume, jikọrọ aka na-eme ihe.+ 36 Ha abụọ jikọrọ aka na-arụ ụgbọ mmiri ndị ga na-aga Tashish.+ Ha rụkwara ụgbọ mmiri ndị ahụ n’Iziọn-giba.+ 37 Ma, Eliiza nwa Dodavahu, onye Marisha, buru amụma ihe ga-eme Jehoshafat, sị: “Ebe ọ bụ na gị na Ehazaya na-emekọtazi ihe, Jehova ga-ala ihe ị rụrụ n’iyi.”+ Ụgbọ mmiri ndị ahụ wee kpuo.+ Ha erughịkwa Tashish.
^ O nwere ike ịbụ, “ndị Meyunim.”
^ O nwere ike ịbụ, “Oké Osimiri Nnu.”
^ Na Hibru, “ụmụ ha ndị nwoke.”
^ Ma ọ bụ “fee Jehova.”
^ Ma ọ bụ “nwee ike inwe ndidi.”
^ Na Hibru, “gọzie.”
^ Beraka pụtara “Ngọzi.”